मातृभूमि Tradescantia कोठा। सामग्री र प्रजनन कोठा Tradescantia
Homeliness, Greenery को रोपण
Tradescantia - सबैभन्दा लोकप्रिय र साधारण को एक houseplants। उसलाई बर्तन अक्सर निजी अपार्टमेन्ट र कार्यालय जस्तै windowsills सजाउनु। यो बोट परिवार Commelinaceae पर्छ र उच्च सजावटी गुणहरू छन्।
Tradescantia को विवरण
मातृभूमि Tradescantia कोठा - अमेरिका को ट्रपिकल र Subtropical क्षेत्रमा। यो एक लामो स्टेम एक बारहमासी जडिबुटी छ। पछिल्लो घनी सानो fleshy संग डटेड ovate छोड्छ। आफ्नो सौन्दर्य र Tradescantia यति लोकप्रिय इन्डोर बिरुवाहरु को आधुनिक प्रशंसकहरूको प्राप्त को कारण। यो बोट पात रंग को विभिन्न प्रजातिका भिन्न हुन सक्छन्।
त्यहाँ शुद्ध हरियो प्लेट संग र दुई रंग, वा बैजनी जस्तै फूलहरू हुन्। र पात र एक whitish बाक्लो ढेर ढाकिएको छन् stems। Tradescantia फूल (यो बोट पृष्ठ मा देख्न सकिन्छ को फोटो) पनि शानदार छैन। ह्यु तन्तु सेतो देखि भिन्न र नीलो र बैजनी गुलाबी गर्न सक्नुहुन्छ। Spiderwort यसरी आफ्नो सजावटी गुणहरू भाग गुमेको, एकदम उच्च बढ्छ। तसर्थ, विशेषज्ञहरु repot वा अद्यावधिक गर्न प्राय सल्लाह।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, को जन्म ठाउ Tradescantia कोठा - अमेरिकी subtropics। सबै भन्दा व्यापक प्रयोग यो बोट उत्तर अमेरिका को दक्षिणपूर्वी भाग मा प्राप्त गरेको छ। महाद्वीप को देशहरूमा यो एक घातक तान्नु Tradescantia मानिन्छ। प्रकृति, यो छ एक groundcover बरु विरल पात र खोक्रो जराको साथ। Dzhona Tradeskanta - यो विश्व प्रसिद्ध naturalist, अनुभवी माली र उत्साहित कलेक्टर को सम्मान मा थियो किनभने यो फूल नाम। उहाँले राजा को टाउको माली रूपमा सेवा र सबै भन्दा सुन्दर र रोचक बिरुवाहरु सङ्कलन संसारभरि यात्रा। यो शोधकर्ता Tradescantia सहित परिवार को पहिलो विवरण गरे Commelinaceae छ।
धेरै उत्पादक सौन्दर्य लागि मात्र होइन Tradescantia नस्ल। यो बोट वास्तवमा भिटामिन को एक वास्तविक गोदाम छ। तिनीहरूले विरोधी भडकाऊ र hemostatic असर रूपमा, घाउ लागू - यो कोठा फूल spiderwort (तातो घाम देश बिरुवाहरु को जन्म ठाउ) छ छोड्छ। साथै, रस फरक antidiabetic गुण छ।
Tradescantia र पाल्तु जनावर
यो बोट को पात बिरालोहरु nibbling जस्तै धेरै उपयोगी छन्। सामान्यतया यो तिनीहरूलाई मा भिटामिन रूपमा अनुमति धन्य होस्टहरूको छ साँच्चै धेरै छ। अक्सर Tradescantia मछलीघर माथि माउन्ट। र यति पात यसको शाखा पानी फसे कि। एक बिरालो जस्तै तरिकामा जलजीवालय माछा, तिनीहरूलाई खुसीसाथ खाने।
(- त्यहाँ को 90 भन्दा बढी प्रकारका छन् जहाँ एक स्थान बोट को जन्म ठाउ) अमेरिका, तपाईं Tradescantia रूपमा यो फूल को समूह को एक किसिम पाउन सक्नुहुन्छ। को पाठ्यक्रम, इनडोर वातावरण मात्र केही नस्ल छन्। सबै भन्दा लोकप्रिय Tradescantia virginiana, zebrina, streamside र धेरै-flowered छन्। अर्को, यी प्रजाति को विशिष्ट सुविधाहरू विशेषता छन् के विचार गर्नुहोस्।
, प्रजाति अंतर रहन्थ्यो जो सामान्यतया एक creeper Tradescantia। यस सन्दर्भमा एउटा अपवाद यस प्रकारको छैन। यो एकदम बैजनी-रातो stems संग सुन्दर टोकरी बोट छ। यो किसिम को पात, ovate छन् चुच्चा टिप, रातो हरियो, चाँदी streaks संग। तल प्लेट एक बैजनी रंग छ। फूल, zebrinoy Tradescantia गुलाबी छ व्यास 1-2 सेमी पुग्न सक्दैन।
यो प्रजाति को मार पनि creeping छ। लम्बाइ चार मिटर पुग्न सक्दैन। मातृभूमि Tradescantia - अमेरिका, जहाँ यो एक उल्लेखनीय बोट बन्धन पात को क्षेत्र मा (पानी वा जमीन सम्पर्कमा) छ जरा उत्पादन गर्छ। निस्सन्देह, यो सम्पत्ति र कोठा अवस्था सुरक्षित छ। यो प्रजाति को पात6सेमी लामो र एक ovoid आकार हुन सक्छ। आफ्नो रंग विविधता आधारमा फरक हुन्छ। धेरै सुन्दर, उदाहरणका लागि, Prirechnaya tradescantia Variegata, सेतो, हरियो पात भएको। Quicksilver मा चांदी हरियो छन्, र पूर्व शरमाना जवान मार को एक उज्ज्वल गुलाबी रंग लागि बेशकीमती।
यो पनि एक creeping खडा stems संग बोट जसको उचाइ 15 सेमी पुग्न सक्दैन छ। यो प्रजाति को पात ovoid, चमकदार हरियो माथि बैजनी तल छ। एक variegated सेतो र हरियो प्लेट लागि बेशकीमती को विविधता। Tradescantia फूल (फोटो तल हेर्न सक्नुहुन्छ), यो प्रजाति भनेर ठूलो परिमाणमा बढ्न एक सानो सेतो, छ। तसर्थ, वास्तवमा, यो यसको नाम थियो।
को भर्जिनिया spiderwort
सोझो बानी यस प्रकारको, 60-90 सेन्टीमिटरको उचाइ पुगन। त्यो एक ट्यूबलर आकार छ Stems र पात धेरै लामो (40 सेमी) बढ्न। उज्ज्वल हरियो तिनीहरूलाई रंग।
कसरी बिरुवाहरु हेरचाह गर्न
मातृभूमि Tradescantia कोठा - उष्ण कटिबन्धीय दलदली क्षेत्रमा। तसर्थ, यसको सबै चिस्यान र प्रकाश-आवश्यकता प्रजाति। संयंत्र संग पट को खिडकी मा सबै भन्दा राम्रो छ राख्न। यसको पात र stems कम्तिमा एक सानो सूर्यका प्राप्त गर्नुपर्छ। को penumbra Tradescantia (शुद्ध हरियो पात संग) मा पनि बढ्न, तर उनको रंग त उज्ज्वल छैन हुनेछ।
को गर्मी समयमा एक बिरूवा टीन अक्सर आवश्यक छ। को spiderwort अन्तर्गत माटो निरन्तर नम हुन आवश्यक छ। चिसो मौसममा कम हजारी, तर पूर्ण रद्द छैन। सुक्खा हावा एक houseplant पनि धेरै खराब कुरा वहन छ। गर्मी मा, यो एक दिन कम्तिमा दुई पटक sprayed छ।
Tradescantia वसन्त र गर्मी खाद। यस मामला मा, जो एक विशेषता भण्डारमा किनेको गर्न सकिन्छ Ornamental बिरुवाहरु, को लागि एक विशेष मल प्रयोग गर्नुहोस्। हरेक दुई हप्ता एक पटक माटो यसलाई बनाउन।
पहिले नै उल्लेख रूपमा, spiderwort बोट गर्न अनुवाद छैन, यो आवश्यक समय देखि repot समय छ। वसन्त यो प्रक्रिया प्रदर्शन। प्रति वर्ष पटक कुनै थप 2-3 भन्दा - गर्दै छन् जवान बिरुवाहरु एक वर्ष पुरानो एक पटक सिफारिस गरिएको छ। फूल transplanting गर्दा साथ छोट्याउन। साथै, माटो shards वा पेबल्स को राम्रो जल व्यवस्था गर्न आवश्यक छ हरेक समय।
अमेरिका - छ कि जहाँ यो मुख्य रूप vegetatively reproduces Tradescantia, को जन्म ठाउ, स्टेम नोड्स देखि जरा उत्पादन गर्छ। कोठा अवस्था मा रूपमा बीउ देखि वा झाडी विभाजन cuttings देखि बढ्न सक्छ। दोस्रो विधि प्राय प्रयोग गरिन्छ। वर्ष को कुनै पनि समय cuttings को माध्यम द्वारा यस बोट प्रोपेगेट गर्न। लगभग 15 सेमी यस फिट रोपण लम्बाइ लागि। Cherenochki प्रति पट 5-8 टुक्रा लगाए गर्नुपर्छ। तिनीहरूलाई Rooting धेरै चाँडै हुन्छ - केही दिन भित्र।
बीउ Tradescantia प्राप्त गर्न धेरै गाह्रो, र यसैले घरमा यसरी दुर्लभ छ यो बोट प्रचारित छ। बुश को विभाजन प्राय प्रयोग गरिन्छ। तर Tradescantia यसरी प्रचारित केवल वसन्त मा, छ, जब जवान मार मा बढ्न थाल्छ।
Tradescantia बढ्दै गर्दा के समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ
घरमा समय Tradescantia समय देखि बिरामी र lethargic हेर्न सुरु हुँदैछ। कारण फरक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, spiderwort एक खैरो रंग प्राप्त, पातहरु को सुझाव सुक्खामा सुरु भने तपाईँले कोठा मा चिस्यान वृद्धि गर्न वा कम से कम केन्द्रीय ताप radiators देखि दूर पट हटाउन आवश्यक छ। यो समस्या को कारण सामान्यतया हावा को अत्यधिक सूक्खापना छ।
यो sluggishness stems संग संयुक्त गरिएको छ भने, त्यसैले बोट बस पर्याप्त पानी छैन। त्यो पानी को आवृत्ति वृद्धि गर्न आवश्यक छ। पानी धेरै छ भने, माटो नै spiderwort बाला खैरो हुन्छ र Rot गर्न थाल्छन्। प्रकाश को कमी को बोट पात रंग को हानि मा प्रकट भएको छ।
किरा र रोगहरु
फूल spiderwort एक एकदम रोचक छ, तर दुर्भाग्य, तिनीहरूले अक्सर किरा प्रभावित छन्। सबैभन्दा खतरनाक एक जब यो छ माकुरा पैसाबारे। हर्जाना यो कि पात यसको उपस्थिति, संक्रमण बाहेक हावा को सूक्खापना गराउँछ। संयंत्र यसलाई को हार को एक चिन्ह वेब को interstices मा माकुरा कण को उपस्थिति छ। संक्रमित बोट को पात गिर गर्न थालेका छन्।
यो महामारी देखि Tradescantia छुटकारा गर्न, यो चलिरहेको पानी अन्तर्गत rinsed र Soapy पानी संग पात हटाउन गर्नुपर्छ। यो बोट 0.15% "aktellik" समाधान स्प्रे गर्न सम्भव पनि छ।
त्यसैले, अब तपाईंले थाह Tradescantia कोठा को जन्म ठाउ कि - अमेरिका। ज्योति र पानी-मायालु बावजूद, बोट unpretentious को फूल बेच्ने व्यक्ति छ मानिन्छ। कुनै पनि अवस्थामा, अपार्टमेन्ट, कार्यालय वा balconies, को पाठ्यक्रम, लागत को सजावट लागि यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
Blooming फूल कोठा: नाम र फोटो
बांस कोठा - बिरुवाहरु हेरचाह
Swordplay बिरुवा पेपर
सिउँडी Cereus पेरू: नर्सिङ, फोटो
इटालियन पाइन वा पत्थर पाइन: वर्णन, खेती सुविधा र समीक्षा
Monstera विनम्रता: विवरण र फोटो
पेडिलन्थी टाइटिमिलोड: घर हेरविचार, प्रजनन र प्रतिक्रिया
Farce - यो मध्ययुगीन थिएटर को मुख्य विधा हो
के हात मा एक दाना गराउँछ?
मार्ग क्रास्नायार्स्क - मास्को। क्रास्नायार्स्क - मास्को: समय, दूरी
Plastov "गर्मी" तस्बिर। विवरण र कहानी
सपना कस्तो छ? सपना पुस्तकले बताउनेछ!
कम वजन स्वादिष्ट: सेम आहार
आमाको थन को उपचार: कठिन तर सम्भव
जेट (पत्थर) - खनिज गुणहरू। जेट देखि उत्पादन
सान्त्वना सबै रंग - टिन्टिङ रंग। आफ्नो हातले टिन्टिङ रंग